Nhau - Maitiro Ekusarudza uye nekushandisa otomatiki Cat Chimbuzi
Ndeapi Akanakisa Ekuzvichenesa-marara Mabhokisi?
Kuwana yakanakisa otomatiki katsi marara bhokisi rekiti yako kunoda kutsvaga chiyero pakati pezvinhu zvaunoda uye izvo kati yako inogadzikana nazvo. Dzimwe katsi dzinogona kudziviswa kana kuputswa neruzha rukuru, saka bhokisi remarara rakagadzirirwa kushanda chinyararire kana kunonoka kuburitsa kusvikira kati yareba yaenda inogona kunge iri nani. Dzimwe katsi dzinogona kusarudza imwe nzvimbo, saka uchafanira kutsvaga otomatiki bhokisi remarara rakawedzera nzvimbo.
Kana uine katsi, uchafanira kumirira. Vagadziri vanotaura kuti otomatiki marara mabhokisi anoitirwa katsi dzakapfuura mwedzi mitanhatu. Nekuda kweiyo diki saizi yekiti, dzinogona kuve dzakareruka kune sensors kana diki kwazvo kukwira mune mamwe mauniti, kana kutogona kudya marara. Kana katsi yako yasvika pakukwana zvakakwana, iyo smart litter box ichaita basa rayo muhupenyu hunotevera hwekati
Kugadzira iyo Shift kune Yega otomatiki Litter Bhokisi Kako Kako
Ese otomatiki marara mabhokisi anoda nguva yekuchinja. Yese otomatiki marara emakani anoda nguva yekuchinja. Kazhinji kutaura, zvinogara zvichitora nguva yekuchinja kuti kati ijairire chinhu chitsva, uye zvakafanana zvinoenda kushandisa otomatiki marara bhokisi. Uye vanhu vane curve yekudzidza futi, yekuzadza marara kune chaiyo huwandu, kutarisa pairi nguva dzose, kunetsa nyaya, nezvimwe.
Naizvozvo, kana uchishandisa E Automatic Cat Litter Bhokisi rekitsi, nyatso tarisa kune ino shanduko nguva, zvikasadaro zvinopesana.
Kana tichiimisikidza kekutanga, isu tinogara tichikurudzira kuchengetedza iyo unit isina kubviswa kana mu 'off' mode kusvikira kati ichishandisa nguva dzose. Paunenge uchigadzira switch iyoyo, zvirinani kuchengeta yechinyakare marara bhokisi padyo kusvikira katsi iratidze yakajeka sarudzo ye otomatiki bhokisi.